पार्टी फुटेको होइन, केही कुहिएर झरेका पात भएका हुन् : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा डा. पुकार नियुक्त
काठमाडौँ — मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ पुन: नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हाे ।
उनले यसअघि पनि निर्देशककाे रुपमा काम गरिसकेका छन् ।
डा. श्रेष्ठलाई हटाएर ओली सरकारले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. प्रेम ज्ञवालीलाई निर्देशक बनाएको थियो । डा. श्रेष्ठलाई निर्देशक बनाउनका लागि सरकारले गठन आदेश नै परिवर्तन गरेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १४:५९